Sucuudiga oo beeniyay in dhaxal sugaha dalkaas Mohammed bin Salman uu doonayo inuu iibsado Manchester United – Gool FM
(Riyadh) 18 Feb 2019. Dowladda Sucuudiga ayaa beenisay warar ay saxaafadda Ingiriiska shaacisay oo sheegaya in dhaxal sugaha dalkaasi Mohammed Bin Salman uu qorshaynayo in uu lacag fara badan ku iibsado kooxda Manchester United.
“Wararka sheegaya in Mohammed Bin Salman uu doonayo in uu iibsado Manchester United gebi ahaanba waa waxba kama jiraan” sidaa waxaa Twitter-ka ku qoray Wasiirka Warbaahinta Sucuudiga Turki Al-Shabanah.
Waxa uu Wasiirku intaa ku daray in Manchester United ay la kulantay Sucuudiga si ay fursad dhanka xayaysiinta ah, balse aysan jirin wax heshiis la isla meel dhigay.
Axaddii ayaa wargeyska ‘The Sun’ uu qoray in Mohammed Bin Salman uu 4.9 bilyan oo dollar doonayo in uu Manchester United kaga iibsado qoyska leh ee reer Glazer.
Wargeysku waxa uu xusay in heshiiskaasi bishii October laga wada hadlay, balse wixii ka dambeeyay dilkii weriyihii Sucuudiga ee Jamal Khashoggi ee lagu dhex khaarijiyay qunsuliyadda KSA ee Istanbul uu heshiiskaasi gaabis noqday.